Chọpụta nke kachasị mma ncha ntutu | Bezzia
Ihe kacha mma siri ike shampoos
Susana Garcia | 04/04/2021 20:00 | Mma, Mma ngwaahịa
La echiche nke shampoo siri ike rutere n'oge na-adịbeghị anya, ma ha abụrụla ihe na-ewu ewu ma a bịa n’ilekọta ntutu isi anyị. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji gosi gị ihe anyị chere bụ ncha ntutu kachasị mma na ahịa, otu ihe ịchọ mma zuru oke maka ilekọta ntutu anya na mmegharị kwa ụbọchị, ebe ọ bụ na ncha ntutu bụ otu n'ime isi ihe na-eme ka ntutu dị mma.
na shampoo siri ike na-abịa n'ụdị nke na-eme ka gburugburu ebe obibi dịkwuo mma, ebe ọ bụ na ha anaghị enwekarị ọkpọ plastik, mana kwa, ịbụ ndị siri ike, a na-eji kemịkal dị ole na ole iji mepụta ụdị ha na ọtụtụ n'ime ha bụ ihe metụtara ụlọ, nke zuru oke maka mmiri, nke anaghị emerụ ya. Ya mere, anyị chere na oge eruola ka anyị gabazie na ihe ịchọ mma siri ike.
1 Igwe ntutu site na Lush
2 Ihe ịchọ mma nke nchacha Maria
3 Dr Osisi ncha ntutu abụọ n'otu
4 Valquer ntutu ncha ntutu
Igwe ntutu site na Lush
Nke a bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị kacha pụta ìhè na ihe ịchọ mma siri ike, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị shampoos, kamakwa ihe mkpuchi, mmanụ na ụdị ihe niile. Shampoos siri ike Lush bụ otu n’ime ihe kachasị mma enwere ike ịzụta ya na weebụsaịtị ha ma enwere ọtụtụ dị iche iche. Angel Hair shampoo bụ otu n'ime ndị na-ere ahịa kachasị mma, ọkachasị n'ihi na ọ dị nro ma dịkwa mma maka ụdị ntutu niile. N'etiti ihe ndị mejupụtara ya Ylang ylang ka ọ daa ụda ma lekọta ya. Aquafaba na-agbakwunye ike ma na-enwu gbaa, ebe mmiri bilitere na amoosu amoosu na-enyere aka ilekọta akpụkpọ ahụ kachasị emetụta. Soy lecithin na-enyere aka ịmịkọrọ ihe ndị ọzọ. Ihe dị mma bụ na anyị nwere ike ịhụ ihe niile mejupụtara yana ihe onye ọ bụla n’ime ha na-atụnye ụtụ na ntutu anyị, nke na-enyere anyị aka ịhọrọ nke ọma.
Ihe ịchọ mma nke nchacha Maria
Este shampoo siri ike bụ ihe okike, vegan na ejiri mee. Ọ bụ ntutu e mere maka ntutu mmanụ, ebe ọ bụ na ya na ihe ndị dị na ya ọ na-agba mbọ idozi nsogbu nke sebum secretion na mpaghara isi, nke bụ isi nsogbu ntutu mmanụ. The jojoba mmanụ dị na ya na-enye hydration na-enweghị mmanu mmanu. Ihe ọ lemonụ lemonụ lemon bụ ihe na-enyere ike astringent ya aka ịhazigharị abụba. Clayrọ kaolin na-acha ọcha na-enyere aka ihicha isi nke adịghị ọcha n'ụzọ dị nro, na-enweghị imebi pH ya. Mkpụrụ osisi Hibiscus na mmanụ rosemary na-enyere aka mee ka ntutu dị ike ma sie ike site na mgbọrọgwụ. O doro anya na ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ihe ndị dị na ya na maka ilekọta ntutu mmanụ.
Dr Osisi ncha ntutu abụọ n'otu
Ọ bụrụ na ịnweghị oge buru ibu maka emume ntutu gị ma ọ bụ dị umengwụ, ị nwekwara ike ịzụta shampoo abụọ dị n'otu dị ka Dr. Tree. N'ebe ọwụwa anyanwụ shampoo nke oyibo na-esi ísì ụtọ dị mma maka nlekọta na-edozi ahụ. O nwere mmanu argan, nke anyi ma na amara ya dika ọla edo mmiri maka ike ya na enye aru. Na mgbakwunye, ọ nwere vitamin A na E iji mee ka ọ dị ọhụrụ ma lekọta eriri ntutu. O nwekwaa koko butter butter na-elekọta skal. Ihe kachasị mma na ncha ntutu a bụ na ọ na-ehicha ma na-ehicha ya ka ị ghara iji ihe eji eme ihe.
Valquer ntutu ncha ntutu
Firlọ ọrụ ndị a niile nwere ọtụtụ ụdị ncha ntutu, ọ bụ ezie na anyị na-ekwu maka naanị otu. Dịka ọmụmaatụ, nke a sitere na Valquer bụ maka ntutu isi, ọ bụ ezie na e nwere ụdị ntutu ndị ọzọ. N'ebe ọwụwa anyanwụ akọrọ ntutu ncha ntutu atụmatụ dị oké ọnụ ahịa aki oyibo mmanụ ịgbanye ya mmiri. Ekwesiri ikwu na obughi ncha ntutu nke nwere ihe okike ma obu odi nma ma oburu na ichoghi ihe vegan.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Ihe kacha mma siri ike shampoos
Macadamia nut mmiri ara ehi, uru na otu esi akwadebe ya